umshini wokushayela imoto we-inverter duty motor variable speed motor AC Inverter Drive motor
I-AC inverter duty drive motor variable speed motor
Isitayela esisha Inverter Motor
Umhlinzeki Womhlaba, Umthumeli, kanye noMsabalalisi we-IEC inverter duty motor, Variable Speed ​​Inverter Motor
Idizayini yemoto inverter
Okuvamile Injongo vs. Inverter Duty
I-inverter-duty motor umqondo omusha kakhulu owadingeka
njengoba ama-motors aqala ukuqhutshwa ama-VFDs (ama-inverters noma ama-AC drives). iec inverter duty motor, Amashayela amaningi wemvamisa eguquguqukayo amadala ahlukaniswa uhlobo lwama-inverter circuitry asetshenziswa ku-VFD. I-100 hp inverter duty motor, I-inverter-duty motor umqondo omusha kakhulu owadingeka lapho ama-motors eqala ukuqhutshwa ama-VFDs. imoto yesigaba esisodwa inverter duty, Industrial kagesi izimoto atholakala ngezinhloso nezinqubo ezijwayelekile eziningi. Noma kunjalo, ezinye izinhlelo zokusebenza ze-Speed ​​Variable ze-AC zidinga isivinini esingaguquki.
Izinhlobo ze-AC Motors
Ama-motors kagesi wezezimboni ayatholakala kwizicelo nezinqubo ezijwayelekile eziningi.
Uma noma iyiphi yale mikhiqizo ingeyakho, sicela uxhumane nathi! Sikulungele futhi silindele ukubambisana kwethu. Sithatha ikhwalithi njengenzuzo nentengo ephansi njengobuqotho. I-variable frequency drive (VFD) uhlobo lwesilawuli semoto esishayela imoto kagesi ngokushintsha imvamisa namandla kagesi. Izinhlobo zeWashdown nePaint-Free zama-motors wethu we-AC Inverter Drive zenzelwe isivinini esishintshayo.
Mayelana Nathi Nezinsizakalo
I-VFD Eyodwa kuya Kwesithathu Indlela engabizi ukuthenga i-phase phase variable frequency drive (VFD) eyodwa ukuze kwenziwe umsebenzi. I-PowerDrive's 3000 Watt inverter yamandla ifaka ubuchwepheshe obungenawaya be-Bluetooth nge-interface ye-APP yokufinyelela okukude ekuvumela ukuthi wenze ngezifiso izilungiselelo kalula. I-inverter-duty motor umqondo omusha kakhulu owadingeka lapho ama-motors eqala ukuqhutshwa ama-VFDs.
Ngabe udinga ikhotheshini?